बैदेशिक रोजगारीमा जानेमा सुदूरपश्चिमका सबैभन्दा कम « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०९:२८
सुदूरपश्चिमबाट ९० र कर्णालीबाट ७० प्रतिशत मानिसहरु कामका लागि भारत जाने गर्छन्
धनगढी / भारतबाहेका मुलुकमा रोजगारी खोज्न जानेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको संख्या सबैभन्दा कम रहेको भेटिएको छ ।
बिहीबार धनगढीमा सार्वजनिक भएको नेपालको श्रम आप्रवासनमा काम गर्ने सरोकारवाला निकायहरुको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमका २.६ प्रतिशत मात्र तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् ।
अध्ययन अनुसार सुदूरपश्चिम भन्दा कर्णाली प्रदेशका बढी मानिस रोजगारीका लागि तेस्रोमुलुक जाने गरेका छन् । जसअनुसार कर्णालीका ३.२ मानिस रोजगारी खोज्न तेस्रो मुलुक जाने गर्छन ।
यस्तै सबैभन्दा बढी प्रदेश १ र २ का क्रमश २४.४ र २४. २ प्रतिशत मानिसहरु रोजगारीका लागि तेस्रोमुलुक जाने गरेका छन् । यस्तै गरेर वागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका क्रमश १५, १३, १६ प्रतिशत मानिसहरु तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन् ।
अरु प्रदेशको तुलनामा सुदूर र कर्णाली प्रदेशका नागरिक भारत बढी जाने भएकोले पनि तेस्रो मुलुक जानेको संख्या कम भएको अनुमान गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिमबाट ९० र कर्णालीबाट ७० प्रतिशत मानिसहरु कामका लागि भारत गएका छन् ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा भारत बाहेकको तेस्रो मुलुक जानेमा सबैभन्दा बढी धनुषा, झापा र सिराहा जिल्लाका रहेका छन् । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये तेस्रो मुलुक जानेमा सबैभन्दा बढी कैलाली र कञ्चनपुर छन् ।
सेन्टर फर माइग्रेसन एण्ड इन्टरनेशनल रिलेसन्स (सिएमआइआर) र समता फाण्डेसनले सन् २०१९/ २० मा गरेको सो अध्ययन अनुसार नेपाल र नेपालको जनसंख्या आप्रवासनमा बढी निर्भर हुन थालेको छ । जसअनुसार औपचारिक माध्यामबाट नेपालमा ८. ७९ अमेरिकी डलर नेपाल आउने गरेको छ जुन रकम कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५.३८ प्रतिशत हो ।
अध्ययनमा संलग्न विभूकिरण घिमिरेका अनुसार बैदेशिक रोजगार विभागले ५९ लाख ५५ हजार ०५१ जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ ।
घिमिरेका अनुसार नेपालीहरु रोजगारीका लागि १२७ वटा देशमा जाने गरेका छन् । त्यसमध्ये ३६ प्रतिशत खाडी र १६ प्रतिशत मलेसिया जाने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या भने निक्कै कम रहेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या ८.३६ मात्र छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष नारायण बराल, उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख टंक विष्ट, नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक, नेपाल वाल संगठनका केन्द्रीय सदस्य चुडामणी भट्ट, रिर्टनी चेतन थापा, सञ्चारकर्मी मिलन परियार, ट्रेड यूनियनका जीतबहादुर मल्ल लगायतले वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित बनाउन सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्ने बताएका थिए ।
सो अवसरमा भएको छलफलमा अधिकांश सहभागीले विदेश जाँदा सीप सिकेर जाँदा राम्रो काम र सेवा सुविधा पाइने भएकोले सीप सिकेर जाने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । भने कतिपयले बालबालिकालाई खासगरेर भारतको रोजगारीमा जानबाट रोक्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
समता फाउन्डेसनका विकास राईले सबै प्रदेशमा प्रतिवेदन बारे छलफल चलाएर आएका सुझाव समेटेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने बताए । सो कार्यक्रमको फाया नेपालका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर बस्नेतले सहजीकरण गरेका थिए ।